AKHRISO XOG HALKUDHIG U AH XILDHIBAAN DHAAYOW – idalenews.com
AKHRISO XOG HALKUDHIG U AH XILDHIBAAN DHAAYOW
Shalay waad ku faraxsanayd in uu Oday kuu ahaado oo gadaashiis laga hadlin, talada reerkana in isaga looga danbeeyo ayaad aad u jeclayd. Marwalba in uu joogo agataada oo cidna idiin dhaxayn ayaad ku dadaali jirtay si aad ula wadaagto wixii arin ah oo Tolka ku soo kordha.
Hadalkiisa waad marxabayn jirtay adoo u muujinaya qadarin iyo u hogaansanaan awaamiirta Odayga Reerka si aad u hogo tusaalayso in aad tahay Baari Odayga dhankiisa laga soo marin oo had iyo jeer jecel in Odayga uu ahaado Mudanaha garta Reerka halka uu u mooso marna laga murmin ee ugu magaca weyn Reerka.
Ma lahayga Taasi hadda mo’ogid waxaana laga yaabaa in aysan madaxaagaba ku jirin oo xusuusta maskaxdaada marna aysan ku soo dhacayn in aad soo martay marxaladdaas oo aad Odayga ugu meeraysan jirtay sida igir Maqaarayda.
Bal milicso taariikhda, ma foga kamana badna laba sano haddeeysan kaba yarayn. Muddo dhow ayeey ahayd maan qof caqli iyo aqoon leh sahal uga baxayn, maraan la dhaame mooyee.
Ma sidaasaa la’isu baddalaa haddii la helo Muraadka, ma sidaasaa loo iloobaa marin aad mar dhow martay misna aadan ka maarmayn, hadhoowna aad rabto in aad ku soo noqoto, mayee waa loo dardayaa xitaa haddaad maagan tahay in aad marin oo aad meel kale dayo is tiri.
Maalmaha waa tarsimayaal is daba socda oo leh tirsanayaal is xiga oo ku dhex jira 360 maalmood iyo ayaama kooban oo qof waliba uu ka qaadanayo inta uu Illaaheey u qoray in dhexdeeda uu ku ceesho.
Bal kawaran qofka intaas gudahood doonaya in u mada dhan dhaqankeed iyo xeerkeeda uu siduu doono ka yeesho, iyadoo ay joogaan hogaankii soo jireenka ahaa ee ummaddaasi ulhaayga iyo marjaca u ahaa ee wixii halaabis ah ee tolkaasi keensado ebedkood samaanteed iyo xumaanteed xabadka u soo garaacan jireen.
Mudnaanta warkayga iyo meesha aan hiigsanayo marinkeedu uu yahay haddaan idiin macneeyo, waa mas’alo maalmahan magaalda dhextaalo Mudanayaashii la doortay mansabka loo xambaarshay mustaqbalka reerka iyo mashaariic horumarineed maatadda ay matalaan in ay ugu keenaan meeshii laga sugaayay ma waxay noqotay Malaaqii Beesha hala badello si aan meesha ugu nagaado.?
Waa mas’allo furan oo jawaabteeda ay bixinayaan reerihii todobaadyadii tegay taasi tolkooda qabatay ee Maantadan la joogo wali ay la taalo. Ninba tiisa iyo tahay annaa ku talin ii talin maysid taydaa meel mari madar iyo madal u tahay.
Tiiyo mudanaha moshinka Malaaqa kula soo noqday in meel kale uu la’aado mudantahay isla markaana loo miirceliyo oo marinkiisa la tuso hadduu dacal maray iyaduna tahay mid uu u baahanyay haddii u war maqli.
Guntii iyo gabagabadii waxaan qormadan ku soo afmeerayaa, mudanoow hoowshaada maaha Malaaqbaan badalayaa, Malaaq bedelkiisa mooshin maahee Golahaaga joog inta xili xileedkaaga kaaga dhimman.
Midaad doonise “LAMA GAARINE HA LOOGIN”.
2020: Olole iyo Kasbasho ayaa ah Midda kala saaraysa cidda Mudan xilka ee u ah ehel ee leh aqoonta xubinnimada Golaha Shacabka ee aan ku Imaan hanaanka 4.5 kaasoo kursiga kaydka galiyay aqoon oo safay …………………..? Balantu waa 2020 qof iyo codkiis iyo keensashada 10,000 Cod.
inta ka horaysana waa olole iyo axsaab Siyaasadeed Furan.
NABAD IYO NOLOL waa halku dhigga kuwa samaha jecel.
W/Q/ Mukhtaar Sheekh Aadan(Dalmar)
HOOS KA DAAWO EEDAYNATA XILDHIBAANKA
Daawo Video Madaxweynaha KGS Oo Gaaray Magaalada Baraawe Ee Caasamada KGS
Wasiirka Maaliyadda oo qaabilay Wiilkii ka qalin jebiyay Jaamacadda SIMAD